Inta aynaan sii wada hadlaan oo ku saabsan biirtay MTS ama M2TS files wada, waa in aan ognahay waxa ay yihiin noocyada file yihiin iyo waxa ay yihiin ay u isticmaalay. Kuwani waa qaabab aad HD kaamirada. Tusaale ahaan, marka qof uu qabtay video sidaan oo kale ah, waxaa jira tiro ka mid ah videos lagu burburiyey qaybo halkii video hal. MTS software midoobeen ku milmaan kartaa videos ku jira qaybo waana video weyn. Xirfadlayaasha isticmaali software taas oo sugan oo hufan shaqadaan. Waxaan kula talin lahaa Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) noocaan ah shaqada sida ay u gubtay, waqti yar oo natiijooyin hufan.
Editor video Tani waxay aad u saamaxaaya in ay wada midowdo faylasha MTS adigoo samaynaya jiita ku filan fudud iyo dhibic. Laakiin, aad hesho si aad xaalkaa aad video clips ka hor ku biirtay. Hadda waxaad gelin kara sawir sawirka videos, samayn horyaalka tafatirka, dalban saamaynta photoshop, iyaga retouch iwm biirtay faylasha MTS la app tani waa mid aad u fudud. Ha i dumin in talaabooyin kaliya si aad fahmi karto oo raac talaabooyinka sida aad ka arki taam.
Talaabada 1: Waxaad heli doontaa in uu ordo ku biirto MTS ee shaqadan. Marka ay tahay, waxaad u baahan tahay inaad guji "Import" in ay keenaan faylasha aad ee. Files ayaa markaas tusi doonaa on "Users Album". Dabcan sidoo kale aad u soo jiidi kartaa jeedi faylasha aad rabto inaad ku biirto ka your computer si ay "User Album".
Talaabada 2: Tallaabada labaad ee qorshaha heshiiska uu noqon lahaa si aad u hesho videos ku saabsan waqtiga. Marka aad samayn in, waxaad arki doontaa waqtiga ee midowgii buuxsamay videos aad dooratay. Waad beddeli kartaa si ka ciyaaro videos kuwan. Waayo, jiidi oo hoos u laba videos meelaha ay kala beddelashada. Laakiin ka taxadarnaa in si jiidi oo hoos u videos on midba midka kale sidii ay u carqaladeyn doonaan videos ah. Marka aad la sameeyo, ka heli Falanqeynta nool ee sida wax uga muuqato suuqa kala Xiisaha Leh.
Talaabada 3: tafatirka A fudud ka hor laga guurayo ee files ku tijaabiyo faa'iido tayada video file la mideeyey ah. Waxaad isku dayi kartaa sixiddiisa heerka mugga ee file kasta, qamaar saturation ah, Picture in Picture video, ka duwan, iyo iftiin goobaha iyo wax ka badan ka guddi tafatir ah.
Talaabada 4: Haddii aad sidaan u sameeyey waxa lagama maarmaan u ah video ah, markaas ka dib waxaad u guuri kartaa in tallaabada ugu dambeysa. Dooro "Abuur" si uu uga mid video weyn aad beegsanayo. Dooro qaab wax soo saarka ee file ah, waxaad dooran kartaa tayada file ka Device, DVD iyo YouTube aad. Markaasuu ku dhacay "Dhoofinta".
Sida aad arki karto, ku biirtay faylasha MTS waa mid aad u fudud haddii raaceen talaabooyin ee isku xigxigta, saxda ah. Just isticmaali Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) Software iyo midowgii unbaa in samaysay shaqada. Geedi socodka dhabta ah waa badan ka yar waqti was natiijada weyn ee aad HD video laga duubay. Ku raaxayso daqiiqado qaaliga ah ee aad nolosha ma wada burburiyeen, laakiin mid ka mid movie weyn iyo HD qaab video.
> Resource > Video > Sidee inay la midowdo MTS Files